China Solenoid Valve Vagadziri uye Suppliers - Aokai
Musha > Zvigadzirwa > Solenoid valve
Solenoid valve Vagadziri
Tine makore gumi nematanhatu ruzivo rweSolenoid Valve yevatengi, pls titiudze pazasi ruzivo, isu tichasarudza yako yakakodzera vharafu iwe. Kana iwe unogona kutumira yako sampuli kwatiri, tinogona kuteedzera iwe.
Solenoid Valve Yakajairika Yakavhara kana Yakajairwa Kuvhurwa?
Solenoid Valve Kushanda Pressure?
Solenoid Valve Kushanda Tembiricha?
Ipapo isu tichakutora iwe Solenoid Valve.
2: Seriized Solenoid Valve, diki muhukuru, yakakura kuyerera mwero, yakashandiswa zvakanyanya
3: Pneumatic valve Body material: Brass yakaumbwa yakakandwa ndarira (yehova Î¦ 32, 40, 50chete)
5: Inoyerera semuseve, inokwira chero chinzvimbo; Nzvimbo yakanakisa ndeye
Solenoid yakatwasuka uye kumusoro chaiko kwakananga.
7: Collcan gadzirisa Germany Nass Coil, yeiyo orifice iri pasi pe Î¦ 16-25mm chete
Sei uchisarudza isu Solenoid Valve?
(1) Solenoid Valve Yemhando, isu tinongogadzira zvigadzirwa zvemhando yepamusoro, tinovimbisa kuti zvese zvigadzirwa zvechigadzirwa zvedu ndezvekutanga kirasi, uye yakanaka mhando sisitimu inodzora, saka mhando yezvinhu zvedu yakanaka kwazvo.
(2) Solenoid Valve Mutengo, mutemo wedu ndewekuti "Win-to-Win". Izvi zvinoreva kuti tichitarisa hukama hwedu hwenguva refu hwebhizinesi, isu tinongotora purofiti diki kukubatsira iwe kushambadzira.
(3) Kuendesa, isu tinogara tiine zvimwe zvigadzirwa mustock, saka tinokwanisa kupedzisa kuburitsa mukati menguva yakambotaurwa.
(4) Solenoid Valve Kwete MOQ, ndinofunga chimiro chinokwezva kune vamwe venyu vasina zvikumbiro zvakakura zvechinhu chimwe nechimwe kwenguva.
Safety Structure Magnet Control Valve Gasi Magnet Valve
Chengetedzo mamiriro magineti ekudzora vharuvhu gasi magineti vharafu inokodzera gasi hita.
Gesi Magnet Valve yeKuchengetedza Mudziyo
Yedu gasi magineti vharafu yekuchengetedza mudziyo yakatengeswa pasirese pasirese, kunyanya zvainyatso kuzivikanwa nevatengi vanobva kuAmerica, Europe, Mid-kumabvazuva, Australia.we tine chivimbo chakakura muhunhu, mutengo, uye mushure mekutengesa sevhisi.
Gesi Magnet Valve yeMurazvo Kukundikana Chishandiso
Kambani yedu inogadzira thermocouple uye gasi magineti unit kwemakore akawanda.Thermocouple uye gasi magineti unit inoumba flameout kuchengetedza inodzivirira iyo inoshandiswa zvakanyanya mumidziyo yegesi, senge gasi cooker, gasi oveni, gasi chitofu, gasi hita uye zvichingodaro. , tinoda kukupa iwe gasi magineti vharafu yekudzima moto mudziyo. Uye isu tichakupa iwe yakanakisa mushure mekutengesa sevhisi uye kuendesa panguva.
Kana murazvo wabuda nekuda kwezvikonzero zvisingatarisirwi, thermocouple inokurumidza kurasikirwa nekwaniso, magineti vharuvhu inorasikirwa nekukweva pasi pechiitiko chematsutso, saka pedyo gasi nzira, uye utambe chengetedzo. Chikumbiro chega chega kubva kune vatengi chiri kupindurwa mukati memaawa makumi maviri nemana.
Gesi Stove Kuchengetedzwa Dhizaini Magnetic Kudzora Valve
Kuti tisangane nevariegated zvinodiwa nevatengi vedu, isu tinobatanidzwa mukupa yakakura yakatevedzana yeMagnet Valve.Takatumira kunze kwedu gasi chitofu chekuchengetedza chimiro magineti control valve kune dzinopfuura 30 nyika nerutsigiro rwakasimba rwehunyanzvi, kunaka kwakanaka uye masevhisi.
Magineti vharafu yegasi hovhoni, thermocouple vharafu, chengetedzo chishandiso, murazvo kukundikana mudziyoSize sevatengi chinodiwa.Tinonakidzwa nembiri yemhando, maitiro uye sevhisi.Saka gara uine chokwadi chekugadzirisa edu emagetsi mavharuvhu.
Aokai inyanzvi Solenoid valve vagadziri uye vatengesi muChina. Zvigadzirwa zvedu ndezve CE Certified. Mukuwedzera, isu tinopawo sampuli yemahara. Unogona kutenga zvigadzirwa zvemhando yepamusoro uye zvinogara nemutengo wakaderera kubva kufekitari yedu. Kana iwe uchifarira zvigadzirwa zvedu zvemhando, ndapota taura nesu nekukurumidza. Tarisira kushanda newe! Gamuchira shamwari kubva kumativi ese ehupenyu anouya kuzoshanya, kutungamira uye kutaurirana bhizinesi.